Waxaan idinku leeyahay Google waa ka baxay saaxiib oo noo caawiyay si ay u xalliyaan su'aalo our si dhakhso ah adiga oo na siinaya search engine ugu awoodda badan ee la shaqeeya oo dheeraad ah 300 algorithms kala duwan. Ka sokow search engine Google, kooxda Google ayaa sidoo kale ka shaqeeya ay fiican inaad na siiso nidaamka adduunka ugu fiican hawlgalka mobile i.e., Android.
kooxda Google Android si adag uga shaqaynaysaa in la beddelo dunida oo waa mid ka mid ah habka ugu fiican iyo casriga ah-dhamaadka sare ka hawlgala. Recently, kooxda Google Android dhawaaqay wararka ku saabsan version cusub OS Android i.e., Nougat 7.0 taas oo mar hore la sii daayay in version beta ugu Android ee casriga ah waxaa ujeedada imtixaanka. Sababta Android soo bandhigtay versions cusub sannad kasta ama quarter waa, waxaa oo diyaariya oo dhan kala carar oo ay ka dhigi badan oo isbedel ah horumarinta nidaamka qalliinka more soo jiidasho leh, user cayayaanka saaxiibtinimo iyo dabcan lacag la'aan ah.
Iyadoo Android Nougat 7.0 Tilmaamo aad loo soo jiitay doontaa horumarinta iyo casriyaynta ka Marshmallow in Nougat maxaa yeelay Nougat 7.0 waxaad keentaa oo dhan sifooyinka, qalab, iyo functionalities kale laga cabsado in baahida smartphone user ah.
Android Nougat 7.0 hubaal Nooga keeno doono isbedelka ugu weyn caalamka Android OS. Waxaa si degdeg ah waa, cabsado user-interface iyo qalab ku anfacaya marka la isticmaalayo camera + bar gaadhsiin jiitaa degdeg ah qof walba in ka dhigayaa jidka taagan. Haddii aad ordaya hurdiga ah 5.0 ama Marshmallow 6.0 versions Android hadda ka dibna waxaan ku talinaynaa in aad ugu yaraan ka eegi kartaa muuqaalada iyo Screenshot ee Nougat 7.0 version for waxqabadka wanaagsan.
1 Download update Samsung S5 Neo Nougat
2 Guudmarka Samsung S5 Neo Nougat 7.0 [WARSIDAHA]
3.2 Nougat 7.0 Miyuu encryption Security Advanced
3.3 Experience ay ciyaareyso ay Better in Nougat
3.4 Panel Ogeysiinta Cool in Nougat 7.0 | Jawaabtid fariimaha ka bar wargelinta
Download update Samsung S5 Neo Nougat
Waxaan qoraal this article ulaha smartphone Samsung S5 Neo in ay hadda soo bixi kartaa update nougat Samsung S5 Neo inay ku raaxaystaan ​​nougat ugu dambeeyey 7.0 version Android. maalmahan, shirkadaha wax soo saarka / kiniin inta badan smartphone ay isku dayayaan in ay ugu fiican si loo soo dajiyo Android OS macaamiisha ay sababtoo ah dadka jecel Android ka badan nidaamka wax hawlgalka kale maanta.
Iyada oo Nougat ugu dambeeyey 7.0 version waxaad heli kartaa tan oo sifooyinka ahaanayta xaq on your phone Android ka badan kasta oo kale oo OS. Android waa ugu fiican iyo sidoo kale nidaamka qalliinka il furan by Google. Inta badan saarayaasha smartphone door bidaan in ay ku rakibi Android in kiniiniyada iyo casriga ugu dambeeyey ee ay. Android Nougat 7.0 waxaa socday si ay u dhisaan aasaaska cusub dunida Android.
In this article, Waxaan u tegayaa inaan tuso Screenshot newest of nougat iyo sidoo kale sharixi qaababka cusub ee hab faahfaahsan oo dheeraad ah. Sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa update nougat Samsung S5 Neo aad smartphone dhamaadka this article. Waxaad samayn kartaa inta badan ka soo qaadaan weerar kasta oo tuubada.
Guudmarka Samsung S5 Neo Nougat 7.0 [WARSIDAHA]
Waa in aadan dhayalsan qoraalkii hore ee Android Jelly bean sida, Sandiwiij Cream Ice, KitKat, Hurdiga ah iyo Marshmallow sababtoo ah ma ahaa bilow xun oo dhan. Raadinta ee qoraalkii hore ee Android, kooxda ayaa in ka badan guul si ay u sameeyaan OS waa weyn sida Nougat 7.0 maanta. Kuwani version hore of Android ahaayeen laftiisa run ahaantii la yaab leh marka la barbar dhigo farsamooyinka ay waqti.
Shaki kuma jiro in Android waxaa ka shaqeeya runtii adag tahay in lala iman lahaa wax aad u fiican oo ka badnaa iyo tartamaya. Android doonayo in uu sii-to-date la-rogga technology ugu dambeeyay. Android ayaa hagaagtay tan iyo sanadihii la soo dhaafay iyo in la horumariyo uu dhaxalka.
Developer: Haddii aad waligaa ku doonayso in ay gacan bulshada Android ka dibna aad noqon kartaa sameeysa ah Android sababtoo ah waa nidaamka qalliinka isha furan. laakiin, haddii aad horey u ah Android sameeysa apps / kulan markaas waa in aad ogtahay in aad hadda ururiso karaa apps in Level API 24, taas oo noo, ka dhigan tahay Android 7.0 apps Nougat waxaa ugu dambeyntii garaacid Store Play. Nougat waxay bixisaa qaab app laga cabsado, oo lagu daray la rajeenayo in cayayaanka iyo optimizations.
Hadda, ka dib oo dhan faahfaahin kor ku xusan oo ku saabsan Nougat 7.0 Android waa waxaan idinku leeyahay in aad tahay ku dhawaad ​​yaqaanaan Nougat 7.0 version in doonaa si rasmi ah bilaabay isbuucyada soo socda (warar xan ah ayaa sheegay in). update nougat neo S5 idin siin doonaa Android cusub jir smartphone S5. Waxay leedahay xarrago gaar ah, isku darka midabka laga cabsado, iyo hagaajin kale cajiib yar. Haddii aadan ka soo dejisan iyo rakibi S5 update nougat neo ka dibna aad ku Hadhi ka danbeeya tartanka ee isbeddellada cusub ee technology. Ha aad lacag ku qaataan si ay u iibsadaan qalab cusub la version nougat. Just qaataan dhawr saacadood si aad u cusboonaysiiso telefoonka jira in dambeeyay update OS Android oo aad ka heli oo dhan waxaad u baahan tahay. Marka aad update neo S5 la nougat markaas bilaabi raaxaysan dhan muuqaalada cajiib ah in Google ayaa hadda bixiya.
Shaki kuma jiro in version kasta oo cusub ka Android waa soomi, kutaan go'an, iyo in la wanaajiyo waxqabadka. Nougat 7.0 waa habka ugu fiican ee user S5 in la kordhiyo xawaaraha ay telefoonka. Android Nougat 7.0 kordhin doonaa 70% dhaqso apps la rakibo iyo in la yareeyo ilaa 50% size code ay diyaarisey. versions Android Previous ayaa qaladaad badan iyo qaar ka mid ah user ka cabanaya in ay ahayd ariinta qalab ka dib markii isticmaalka dhowr bilood. sii daayo Nougat waa war run ahaantii laga cabsado, waayo, dadka isticmaala S5. Google qaadataa cabasho dhab ah in sababta, ay bilaabeyna nougat. Iyada oo taageero ka compiler JTI, nougat ayaa qaab sida.
Nougat 7.0 Miyuu encryption Security Advanced
In nougat, Google leeyihiin adkeeyo iyo in la hagaajiyo amniga iyada oo encryption file-ku saleysan. asal ahaan, nuquladii hore Android leeyahay qiyaas ammaanka yar oo ku saabsan in nougat. Android runtii waa nidaamka hawlgalka phone awood badan inta ay bixiyaan ammaanka aad loo adkeeyay.
Experience ay ciyaareyso ay Better in Nougat
Inta badan dadka waaweyn iyo jiilka dhallinyarada ah waa waalan in kulan sare 3D iyo dhallinyarada, kuwaas oo sidoo kale u sooci karaan waqti ay kaliya ciyaaraan kulan ee telefoonada haddii ay OS waxqabadka xaq u. Nougat ka dhigi doonaa oo dhan waxay doonayeen run maxaa yeelay nougat waa siisa waayo-aragnimada ciyaaraha laga cabsado. Hadda waxaad ka ciyaari kara xalinta sare kulan graphic ee neo S5. All aad u baahan tahay inaad samayso waa in rakibi update nougat in neo Samsung S5. Ka dib markii update nougat, aad ku raaxaysan karaan kulan oo aan xannibaad kasta oo graphic iyo garaacday saaxiibadaa by samaynta dhibcaha ugu sareeya.
Panel Ogeysiinta Cool in Nougat 7.0 | Jawaabtid fariimaha ka bar wargelinta
Anigu waxaan ahay taageere weyn u ah hurdiga ah sababta oo ah guddi wargelinta. Laakiin Nougat uu leeyahay guddi wargelinta laga cabsado oo qabow badan hurdiga ah. Iyada oo ay taasi guddi ogeysiis cusub, waxa aad awoodi kartaa in ay ka jawaabaan fariin kasta oo si toos ah uga ogeysiin email aan furo app.
nougat android for neo S5 Galaxy S5 update nougat note 4 update nougat update nougat for j7 Samsung Galaxy Samsung S5 neo firmware download Galaxy Samsung S5 user pdf Buugga download Samsung j7 2015 update nougat Samsung j7 2016 update nougat Samsung note 4 update nougat Samsung nougat liiska update Samsung Kies S5 neo Samsung S5 neo marshmallow uk update software neo Samsung S5 Samsung S5 darawalka USB neo guide user neo Samsung S5 firmware SM-g903f	2017-05-28
Previous: 5+ Android 7.0 Nougat Version casriga
Next: Lenovo Tab 4 8 Price in USD, 32GB la 2GB
BEST DOWNLOAD Suite PC Nokia daaqado (32/64 waxoogaa)